Showing 121-140 of 3,655 items.
सुनसरी । सुनसरीको बराहक्षेत्र-१ कटहरे स्थितमा आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा फेला परेकी १२ बर्षीया एक बालिकाको हत्या भएको पुष्टि भएको छ । मिति २०७७ साल असोज १० गते २ बजे राती १२ बर्षीया मिना राई आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिईन �
ताप्लेजुङमा ट्याक्टरको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु
ताप्लेजुङ, असोज-११ गते । ताप्लेजुङ फुङलिङ-७ स्थितमा बस्ने २६ बर्षीय दिपेन्द्र ओख्राबु लिम्बुको ट्याक्टरको ठक्करबाट मृत्यु भएको छ । आज बिहान साढे १० बजे सोहि स्थान राजमार्गमा ना ६ त ३००० नम्बरको ट्याक्टरले पैदल हिडिरहेका लिम्ब
फेरी घट्यो सुनको मुल्य, प्रति तोलाको कति ?
आज&nbsp;आइतबार सुन र चाँदीको मुल्यमा गिरावट आएको छ ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मुल्य तोलामा ६ सयले घटेर प्रतितोला ९३ हजार ३ सयमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि शुक्रबार सुन तोलाको ९३ हजार ९ सयमा कारोबार भएको थियो �
लडेर ३५ बर्षीय यूवककाे मृत्यु
मोरङ । मोरङ सुन्दर हरैचा-१२ स्थितमा बस्ने ३५ बर्षीय कुमार उरामन को लडेर मृत्यु भएको छ । हिजो अपरान्ह ४ बजे सोहि स्थानमा रहेको न्यु पन्चकन्या सेन्टरी हार्डवेयरमा ल्याएको सिमेन्ट बोकेर स्टोर तर्फ लाने क्रममा अचानक लड्दा उनको मृ�
खेतमा घाँस काट्ने क्रममा लडेर एकको मृत्यु
सुनसरी । सुनसरी ईनरुवा-९ बस्ने ३५ बर्षीया दुखनीदेबी खत्वेको लडेर मृत्यु भएको छ । हिजो दिउसो १ बजे खेतमा घाँस काट्ने क्रममा दुखनीदेबी अचानक लडेर बेहोस भएकी थिईन । बेहोस भएकी उनलाइ आफन्तले तत्काल उपचारार्थ लैजादै गर्दा बाटोमै म�
बिर्तामोडमा माइक्रो को ठक्करबाट ५० बर्षीय पैदल यात्रीको मृत्यु
झापा,असोज-१० गते । पाँचथर याङ्बरक-३ का ५० बर्षीय वृखध्वज लिम्बुको माइक्रो को ठक्करबाट मृत्यु भएको छ । हिजो राती सवा ९ बजे झापाको बिर्तामोड-५ स्थितमा बा ४ ख ५१०० नम्बरको माइक्रो गाडीले पैदल यात्रा गरिरहेका लिम्बुलाई ठक्कर दिदा उ�
झापामा लागुऔषध सहित ३ जना पक्राउ
झापा, असोज-०९ गते । झापाको अर्जुनधारा-११ बसपार्क र बिर्तामोड भगवान चोक स्थितबाट लागुऔषध खैरोहिरोईन ब्राउनसुगर सहित ३ जना पक्राउ परेका छन । पक्राउ पर्नेमा बिर्तामोड-३ का २४ बर्षीय बिशाल राजवंशी र सोही स्थानका १५ बर्षीय नर प्रसा�
प्रकाशित मितिः आश्विन 9, 2077
बिर्तामोडमा स्थित छतबाट झर्दा एक बालिकाको मृत्यु
झापा,असोज-०९ गते । झापा बिर्तामोड-५ स्थितमा रहेको एक घरको छतबाट झर्दा १३ बर्षीय कृतिका भण्डारीको मृत्यु भएको छ । हिजो राती १० बजे खाना खाईसकेपछी घरको छतमा गई तल हेर्ने क्रममा अचानक लड्दा कृतिका गम्भिर घाईते भएकी थिईन । उनलाई तत्�
बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् आजको बजार भाउ कति ?
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । लगातार तीन गरी घटेको सुन शुक्रबार भने सामान्य महँगिएको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार सुनको भाउ तोलाको ८ सय रुपैयाँले बढेको छ । जसअनुसार छापावाल सुन प्रतितोला ९३ हजार
बिराट जुटमिलको पर्खाल भत्कीएर किच्दा एक महिलाको मृत्यु
मोरङ, असोज-०८ गते । मोरङ बिराटनगर-१५ रानी एरिया स्थितमा बस्ने ५५ बर्षीया समिरु नेसाको वाल भत्कीएर किच्दा मृत्यु भएको छ । आज बिहान साढे ८ बजे कलमा पानी लिनका लागी जादै गर्दा एक्कासी सोहि स्थानमा रहेको बिराट जुटमिलको वाल भत्कीएर स�
झापा, असोज-०८ गते । झापा बिर्तामोड-७ स्थितमा बस्ने राजु मर्डीको दुई बर्षीय छोरा जिवन मर्डी मृत अवस्थामा फेला परेका छन । हिजो राती ०९ बजे नाबालक जिवन घरबाट हराई बेपत्ता भएका थिए । आफन्तले खोजी गर्ने क्रममा आज बिहान ०६ बजे सोही स्थ�
सुपरभाईजर परनेश खत्रीको सिमलडाँडामा करेन्ट लागेर मृत्यु
धरान । ओखलढुंगा सिद्धिचरण-१२ सिमलडाँडा मोलुङ-१ कुन्तादेबी बस्ने २८ बर्षीय परनेश खत्रीको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ । मृतक खत्री मोलुङ खोला हाईड्रोपावर टान्समिसन लाईनको सुपरभाईजर रहेको खुल्न आएको छ । हिजाे बिहान पौने ११ बजे स�
ह्वातै घट्यो सुनको मुल्य, प्रतितोलाको कति ?
नेपाली बजारमा केहि दिनयता सुनचाँदीको भाउ लगातार ओरोलो लागिरहेको छ । आज [ बिहीबार ] पनि बजारमा सुनचाँदीको भाउ घटेको छ । आज तोलामा एक हजार २ सय रुपैयाँ घटेर सुनको भाउ तोलाको ९३ हजार एक सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यव
इटहरीमा एक हप्तासम्म अविभावकलाई अनलाइन सर्वे फम भर्न आग्रह
इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न अनलाइन सर्वेक्षण गरिरहेको छ । एक हप्तासम्म चल्ने सर्वेमा अविभावकलाई अनलाइन सर्वे फम भर्न उपमहानगरले आग्रह गरेको छ । फममा आफना छोराछोरी पढने विद्यालय, क�
लायन्स क्लब धरानद्वारा रक्तदान कार्यक्राम सम्पन्न
धरान। लायन्स क्लब अफ दन्तकाली धरानद्वारा धरानको भानुचोक स्थित लोकतान्त्रीक चौतारीमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रामा बुधबार ३५ पिन्ट रगत सन्कलन भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपी ज्ञानेन्द्र बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यमा �
बालबालिकाको कानमा लगाएको मुन्द्रा लुटपाटमा संलग्न पक्राउ
काठमाडौं। बालबालिकाको कानमा लगाएको मुन्द्रा लुटपाट गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा एक महिला पक्राउ परेकी छन्। सुनका गहना लुटपाट गरेको आरोपमा महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको टोलीले संगीता क्षेत्रीलाई गोकर्णेश्वर नगरपालिक
धरान आदर्शमा ६ महिला बास्केटबल खेलाडीलाई छात्रावृत्ति
धरान । धरान आदर्श माविले&nbsp; ६ जना महिला बास्केटबल खेलाडीलाई छात्रावृत्ती प्रदान गरेको छ । कक्षाा ११ मा भर्ना भएका ६ जना खेलाडीलाई विद्यालले छात्रवृत्ति प्रदान गरेकाे हाे । छात्रावृत्ति पाउनेहरूमा आशा लामा, मलिका राई, स्नेहा रा
धनकुटा, ६ अशोज। धनकुटामा कोरोना भाईरस फैलदै गएपछि कोरोना भाईरसबाट बच्नका लागी धनकुटा उद्योग बाणिज्य सघले आज धनकुटा अस्पताल रोडका औषधी पससका संचालकहरुलाई फेस सिल र सर्वसाधारणहरुलाई माक्स वितरण गरेको छ । सामाजिक सेवा दिवसको अ�
पहिले गाई बाख्रा चराउन र घाँस दाउरा गर्न जाने स्थानीयको मात्र भेटघाट हुने गरेको काफलडाँडामा हिजोआज दैनिक एक हजारभन्दा बढीको सङख्याका मानिसको आवतजावत भइरहेको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका वडा नं २ काफलडाँडास्थित पर्�
धरान । संखुवासभा चैनपुर-४ का ७६ बर्षीय बुद्वी बहादुर लिम्बुको खोलामा डुबेर मृत्यु भएको छ । हिजो साँझ साढे ५ बजे चैनपुर बतासेबाट घर तर्फ आउदै गर्दा झुत्रे खोला तर्ने क्रममा डुबेर लुम्बुको मृत्यु भएको भनि आफन्तले प्रहरी चौकी सिद�